नाइजीरिया प्रोफेसर एम एम मा शिक्षण प्यार गर्दछ - एमआईएम मा कम्प्यूटर प्रोफेशनल कार्यक्रम
अक्टोबर 3, 2018 /in ब्लग /by cre8or
Obinna Kalu एक गतिशील, उत्साही युवा सहायक कम्प्यूटर साइंस प्रोफेसर छ जसले शिक्षणलाई प्रेम गर्दछ र भविष्यमा गहिरो आँखा छ।
हामी प्रोफेसर कलू संग बसे र उहाँलाई आफ्नो संकायमा सामेल हुन अघि एक विद्यार्थीको रूपमा बितेका समय सहित, उनको पृष्ठभूमिको बारेमा प्रश्नहरूको एक श्रृंखला सोध्नुभयो।
प्रश्न: तपाई प्रबंधनको महर्षि विश्वविद्यालयमा शिक्षण कहिले सुरु गर्नुभयो?
A: मैले मार्च 2015 मा MSCS कार्यक्रम दूरी शिक्षा पाठ्यक्रमहरू पढाउन थाले। त्यसपछि, अगस्त 2017 मा, मैले फेडरफील्डमा यहाँ-कम्पास कम्प्यूटर प्रोफेशनल कार्यक्रम ("ComPro") पाठ्यक्रमहरू पढाउन थाले।
Q: तपाईं MUM मा शिक्षणको मज्जा लिनुहुन्छ किन?
A: मेरो लागि पहिलो आकर्षण हाम्रो अनौपचारिक क्याम्पस वातावरण हो - शान्ति र सहनशीलता हो, हामी आनन्दित छौं। म निकै धेरै दल जस्तै म यहाँ सी.एस. विभागमा काम गर्दछु, र मेरो सह संकाय सदस्यहरूबाट ज्ञानको चौडाई र गहिराइ।
अनि त्यसोभए, हामी ठूला ठूला विद्यार्थीहरूको साथमा सिकेका हरेक कक्षामा काम गर्छौं। यहाँ सिकाउने / सिकाउने सम्पूर्ण दैनिक अनुभव धेरै राम्रो छ!
प्रश्न: के यो दुनिया भर बाट यति धेरै शीर्ष विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्दछ?
A: मुम्बईले व्यावसायिक सफ्टवेयर विकासमा आफ्नो क्यारियरलाई बढावा गर्न सजिलो सजिलो माध्यम प्रदान गर्दछ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा उत्तम यूटीआई आईटी कम्पनीहरूमा शीर्ष-टच, पूर्ण भुक्तानी व्यावहारिक इन्टर्नशिप अनुभव हासिल गर्न सक्दछ - जुन अरु पनि पाउन सकिदैन।
हाम्रा विद्यार्थीहरू धेरै उज्ज्वल, उच्च उत्तेजित हुन्छन्, र सधैं सिक्न र नयाँ विचारहरू र प्रविधिहरू प्रयास गर्न इच्छुक हुन्छन्। हाम्रो CS पाठ्यक्रम पहिलो दर हो।
2004 मा एक विद्यार्थीको रूपमा यहाँ आउनु अघि इङ्गल्याण्डमा एक समान मालिकको कार्यक्रममा पढ्नु अघि तीन तीन वर्ष बिताउनुपछि मैले सजिलै तुलना गर्न सक्थे र उनीहरूको बीचमा उल्लेखनीय भिन्नता देख्न सक्थे। हाम्रो सीएस कार्यक्रममा धेरै व्यावहारिक, उद्देश्य डिजाइन गरिएको एमएस हो। हाम्रो सबै पाठ्यक्रमहरू विद्यार्थीहरूमा सबैभन्दा राम्रो कम्पनीहरू द्वारा धेरै उच्च मागमा नवीनतम कौशल र प्रविधिहरूसँग लैजानको लागी डिजाइन गरिएको छ।
प्रश्न: MUM मा पढाई को विशिष्ट लाभ र फाईदाहरू के हो?
A: पहिलो अनूठा फायदाले ट्रान्जिन्डलन्ट मेटिटिटी टेक्नोलोजी सिकिरहेको छ, जसले विद्यार्थी, संकाय र स्टाफ प्रयोगलाई कम-तनाव, सन्तुलित, सुखी, सुन्दर जीवन बिताउन प्रयोग गर्दछ।
TM ले मलाई सन्तुलित जीवन कायम राख्छ। TM को मेरो नियमित अभ्यासको साथ, म यो फेला पार्छु कि मेरो शिक्षण तालिका कस्तो हुन्छ, मलाई अझै पनि आन्तरिक आनन्द, आनन्द र खुशी लाग्छ।
अर्को फायदाले कम Com-कौशल को गुण हो जुन तिनीहरू ComPro MSCS प्रोग्राममा प्राप्त गर्छन्। 1996 पछि, 1000 यूएस कम्पनी भन्दा बढी हाम्रा विद्यार्थीहरू भर्ती भएका छन्। औसत वार्षिक इंटर्नशिप वेतन लगभग $ 80,000 हो।
प्रश्न: तपाईको शैक्षिक पृष्ठभूमि कस्तो छ?
A: मेरो उच्च शिक्षा अध्ययनमा, मैले पहिले नै म्याथम्याटिक्स मा साइन्स डिग्री स्नातक र नाइजीरिया मा लागोस युनिवर्सिटी लागोसको तथ्याङ्क कमाई। कलेज बाट स्नातक भएपछि, मैले लागु लाग्ने एक कार्यक्रममा लागी लागोस लागु लाग्ने एक सानो तर प्रमुख सफ्टवेयर विकास कम्पनीको लागि केहि वर्ष बिताए। अनि त्यसपछि दुई वर्ष पछि, आफ्नो इलेक्ट्रनिक बैंकिंग टेक्नोलोजी विभागमा बैंकको लागि काम गर्दै।
त्यसपछि म दुई मास्टर विज्ञान डिग्री कमाउन जानुभयो- एक कम्प्युटिंग र इङ्गल्याण्डको बेडफोर्डशायर विश्वविद्यालयबाट सूचना प्रविधिमा, र अन्य कम्प्युटरमा विज्ञान, अन्य यहाँ एमममा, 2008 मा स्नातक।
मैले पहिलो पटक नाइजीरियामा बैंकमा एक सहयोगीको रूपमा एमएम बारे जानें जहाँ मैले काम गरे। उनले एमएम को बारेमा उनको बारेमा जानकारी पाएका थिए जुन उनीहरु यहाँ एक विद्यार्थी थिए (~ 1999)।
प्रश्न: तपाईले तपाईको ComPro को समयमा कहाँ काम गर्नुभयो?SM इन्टर्नशिप र स्नातक पछि?
A: म मेरो इन्टर्नशिप को लागि एरिजोना मा एसएपी मा AECOM र एक सफ्टवेयर डेवलपर III मा एक परियोजना प्रोग्रामर थिए, र बाद में एम्यूम संकाय में शामिल होने से पहले वाशिंगटन, डीसी में शिकागो विश्वविद्यालय में एनएसीसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था।
प्रश्न: तपाई कुन पाठ्यक्रमहरू सिकाउनुहुन्छ?
A: मैले स्नातक स्तरमा सफ्टवेयर ईन्जिनियरिङ्, वेब अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग, इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर, आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रथा र मौलिक प्रोग्रामिंग प्रविधिहरू सिकाउँछु, र पनि डेटा संरचनाहरू स्नातक स्तरमा पढेको छु।
प्रश्न: सफ्टवेयर डेभलपरहरूका लागि तपाईसँग कस्तो सुझाव छ जसले राम्रो क्यारियर चाहनुहुन्छ?
A: जवान, इच्छुक विकासका लागि मेरो सल्लाह उनीहरूका लागि सिक्काको पछि लाग्न र अझ बढी प्राप्त गर्न भोक रहनका लागि हो। त्यहाँ नयाँ उपकरणहरू, प्रविधिहरू र प्रविधिहरू बढ्न र सँगै काम गर्न मजा लिइरहेका छन्। अन्य शब्दहरूमा, नयाँ कुराहरू सिक्न, जस्तै सफ्टवेयर प्रविधिमा भविष्य उज्ज्वल छ!
हाम्रो अद्वितीय MSCS डिग्री प्रोग्रामको बारेमा जानकारी भरिसम्म एक मिनेट केहि नसोच्नुहोस्। यसले सजिलैसँग व्यावसायिक सफ्टवेयर विकासमा तपाईंको क्यारियरलाई बढावा गर्न सजिलो सस्तो प्रस्ताव प्रदान गर्दछ, जसको माध्यमबाट तपाई अमेरिकामा यहाँ सबै भन्दा राम्रो आईटी कम्पनीहरूमा शीर्ष-प्रक्ष व्यावहारिक अनुभव प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रश्न: विद्यार्थीहरूले तपाईको शिक्षाको बारेमा के भन्न सक्छन्?
A: मंगोलियाका पहिले विद्यार्थीले भर्खरै इमेल गरे, "मैले बेलुकी, WA मा सफ्टवेयर विकास ईन्जिनियरको रूपमा धेरै राम्रो काम प्रस्ताव पाएको छु। तपाईंले मलाई सिकाउनुभएको ज्ञान मूल्यवान थियो र मलाई मेरो इन्टरशिपशिप खोज र अन्तरवार्ताको दौरान धेरै धेरै सहयोग गर्यो। म जावा प्रयोगको लागि ब्याक-अन्तको प्रयोग गर्नेछु। धेरै प्राध्यापक प्रोफेसर। "
प्रश्न: तपाईको व्यक्तिगत लक्ष्य के हो?
A: म लामो समयसम्म मेरो शिक्षण क्यामेरामा जारी राख्न योजना बनाउँछु। र म पनि निकट भविष्यमा कृत्रिम बुद्धिको एक क्षेत्रमा मेरो पीडीए को पीछा गर्न (समानांतरमा) आशा गर्दछु।
जब शिक्षण हुँदैन, प्रोफेसर कलुले हाम्रो सुन्दर 365 एकिक क्याम्पसमा साइकल चलिरहेको, ट्रेल दौड र हिड्ने काम गर्दछ।
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/eIMG_5208.1.jpg 3456 5184 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2018-10-03 22:06:462018-10-08 12:03:51नाइजीरिया प्रोफेसर MUM मा शिक्षण गर्दछ
2018 ComPro स्नातक र गृह आगमन ब्रेकेट बाबिसो: एमओएममा ComPro शिक्षा सर्वोत्तम छ